Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Delusional disorder အမြင်သွေလွဲခြင်း စိတ်ရောဂါ
I am curious to know more about on it. I can find some articles in English but you know it was not that as good as in Burmese. If you can give me some information or further reference to read about it please let me know.
“ဆန်းပြား-ရှုတ်ထွေးခြင်း မရှိတဲ့ အရာတွေကို ရှိနေတယ်လို့ ထင်မှတ်နေတဲ့ စိတ်ရောဂါ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်းပြား-ရှုတ်ထွေးခြင်း ဆိုတာတွေက တစ္ဆေ-သူရဲလို မဟုတ်ဘဲ၊ တကယ်လဲ ရှိနိုင်တဲ့ အမှားမျိုး ဖြစ်တယ်။
ဥပမာ သူ့ကို ချစ်-မုန်း နေတယ်လို့ ထင်မှတ်တာ၊ သူ့ နောက်ကနေ ထောက်လှမ်းရေးက လိုက်နေတယ်လို့ ထင်မှတ်တာမျိုး။ အဲလို ထင်မှတ်မှား နေတာတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်၊ ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေးကြောင့်၊ (စကီဇိုဇရီးနီးယား) စိတ်ရောဂါကြောင့် မဟုတ်ရဘူး။ ဒီရောဂါ ခံစားရှိနေပေမဲ့ နေ့တဓူဝ အလုပ်တွေမှာ တက်တက် ကြွကြွ လုပ်နေတဲ့သူသာ ဖြစ်ပြီး၊ အခုလို ထင်မှတ် မှားတာက လွဲရင် လူကောင်းဘဲ။ တချို့လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၊ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုတွေက ဒါမျိုး ဖြစ်နေ-ရှိနေသူကို လေးစားသမှု ပြုတတ်ကြတယ်။ ကိုးကွယ် နေတတ်ကြတယ်။
(၁) Erotomania တစိမ်းတရံ (နာမယ်ကြီး) တယောက်၊ သူ့ထက် အဆင့်အတန်း မြင့်သူတယောက်နဲ့ ချစ်နေတယ်လို့ ထင်မှတ် မှားနေတယ်။ ချစ်စိတ်ကလဲ အလွန်ပြင်းပြတယ်။ သူထင်နေတဲ့သူဆီ ဖုန်းဆက်၊ စာရေး၊ သွားလည်ပတ်တာမျိုး လုပ်တယ်။ သွားကယ်ဆယ်ရတာမျိုးသဘော လုပ်တယ်။ တကောက်ကောက် လိုက်နေမယ်။
(၃) Jealous မနာလို-ဝန်တိုမှု၊ သူ့ ဇနီး-ခင်ပွန်းက သု့အပေါ် သစ္စာမရှိဘူး ထင်မှတ်နေတာ။ ရှိတ်စပီးယား ပြဇာတ်တခုလို Othello syndrome ဆိုတာ ဖြစ်နေမယ်။ သူ့အပေါ် သစ္စာမရှိဘူး ထင်နေတာကို တားဆီး-ပိတ်ပင်တာမျိုး လုပ်မယ်။ ဒါအတွက် ဒေါသထွက်မယ်။ သတ်တာ-ဖြတ်တာအထိ ကြမ်းတမ်းမှု ဝင်လာနိုင်တယ်။
(၆) Mixed လက္ခဏာ-အင်္ဂါရပ်တွေ တခုမက ရောဖြစ်နေခြင်း။
အသက် ၁၈ နောက်ပိုင်း ဖြစ်တတ်ပြီး ၄ဝ ကျော် လောက်မှာ ဖြစ်တာ ပိုများတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ နဲနဲလေး ပိုများတယ်။ (၅၆့၅%) လို့ စပိန်-သုတေသနတခုက ဆိုတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာက Paranoid delusions ပိုဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ Delusions of erotomania ပိုဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသူ၊ အလုပ်အကိုင် ရှိသူ၊ လူမှု-အသိုင်းဝိုင်း နိမ့်ကျသူ၊ အမျိုးသမီးဆိုရင် မုဆိုးမ၊ ယောက်ျားဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ကျဉ်တတ်သူ၊ တိုင်းတပါးကို ထွက်လာရသူတွေမှာ အဖြစ်များနေတာ တွေ့ရတယ်။